“दुधको साक्षी बिरालो” हुनसक्ला र ? : डा. भीम रावल « Ok Janata Newsportal
“दुधको साक्षी बिरालो” हुनसक्ला र ? : डा. भीम रावल
काठमाडौं । नेकपा (दाहाल–नेपाल पक्ष)का नेता डा. भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई मात्र नभइ देशलाई नै धोका दिएको बताउनुभएको छ । पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय विपरित प्रस्तुत हुँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले अन्ततः निरंकुशताको बाटो अंगालेको रावलको भनाइ छ ।
कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ गोदावरीमा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता रावलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको दाबी गर्नुभयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरुको बहुमत पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई नभएको बताइरहेका बेला स्वेच्छिक रुपमा सिंगो देशलाई बन्दी बनाउने अधिकार ओलीलाई नभएको रावलको जिकिर छ ।
जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई निजी कम्पनीजस्तो गरी तहसनहस पार्न कसैले नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । निरंकुश शासकले केही समय दुःख दिएपनि अन्तत्वगत्व सत्यको पक्षमा फैसला हुने रावलको विश्वास छ । डा. रावलले प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकता समेत गुमाइसकेको आरोप लगाए । विगतका ससाना विषयलाई लिएर भ्रम छर्न उद्दत प्रधानमन्त्रीलाई देखेर दया जागेको रावलको टिप्पणी छ ।
रावलले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले मलाई केटोको संज्ञा दिनुभएको छ, केन्द्रीय कारागारमा रहँदा केपी शर्मा ओलीसँग भेट पनि भएन । उनीसँग राजनीतिक विषयमा कुरा नगर्न भनिएको थियो । केटोकै कुरा गर्दा तत्कालीन समयमा म १९ वर्षको आइए पास गरेको केटो, केपी शर्मा ओली भर्खर एसएलसी दिएर आएको २३ वर्षको केटो ।’
डा. रावलले नेकपाका ४४१ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये आफूहरुको पक्षमा ३१५ जना रहेको बताउनुभयो । दाहाल–नेपाल पक्ष नै संस्थापन पक्ष रहेकोले निर्वाचन आयोगले बहुमत सदस्यको पक्षलाई हेरेर पार्टीको नाम नेकपा र सूर्य चिन्ह प्रदान गर्ने रावलको दाबी छ ।
एक फरक प्रसंगमा बोल्दै रावलले अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा तस्करपनि अटाएको संकेत गरे । ‘दुधको साक्षी बिरालो बन्न सक्ला र ? प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुनाइदिनु– रावलले भने । चोरको हातमा चापी सुम्पियो भने के होला ? बुझ्नुस् ।
राजीनामा दिनुअघि देउवाका ज्योतिषसँग हमालको परामर्श, जब ज्योतिाषले यसो भने…